Nin Faransiis ah oo 4 saac gaari dhigtay goob parking ah oo loo keenay qarash qiyaastii ah $190 kun… – Hagaag.com
Posted on 27 Seteembar 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Nin Faransiis ah ayaa la yaabay biilka goob baabuurta la dhigto ee Parking Edigo ee magaalada Paris uu u keenay 170,392 euro (qiyaastii 198 kun oo doolar), marka waa maxay sirtu?
Wargeyska lepoint ee Faransiiska ayaa sheegay in qof walbaa ogyahay in Paris ay tahay halka qiimaha adeegyadu ay sareeyaan. Ninka la yiraahdo Roland oo 60 jir ah oo ku nool Seine and Marne ayaa la amakaagay markuu arkay qiimaha ticket-ka parking station-ka Saint Sulpice oo ku yaala qeybta lixaad ee Paris.
Wuxuu u sheegay wargeyska Le Point Arbacadii la soo dhaafay, “Waxaan imid Sabtidii la soo dhaafay xilli ku dhow duhurnimadii Paris, waxaana ka baxay abbaaraha 4-tii galabnimo isla maalintaasi. 4 saacadood oo aan ku sugnaa goobta gaariga la dhigto ayaa waxaa la i weydiistay inaan bixiyo lacag dhan 170,392 euro.
Wuxuu go’aansaday inuusan bixin lacagtan “baaxadda weyn”, Roland wuxuu dhigay gaarigiisa barta koontaroolka ee looga baxo parking, dhibaataduna waxay ahayd inaysan jirin shaqaale ka shaqeeya qeybtaasi, xaaladduna waxaa sii murjiyay ciriiriga gawaarida ee ka dambeeya; Sidaas darteed ayuu wacay ilaalada baarkinka gawaarida ee saldhigaasi.
Roland ayaa yiri “Qofka i wareysanayey ayaa wuxuu umuuqday mid ka walwalsan mowqifkeyga marka loo fiiriyo cillad shaqada iyo xaalada aan macquulka aheyn ee uu arkay. Marka la soo koobo, kadib markii su’aalo la i weydiiyay, wuxuu i weydiiyay taargada gaariga iyo lambarka taleefankayga, ugu dambeyntiina wuxuu go’aansaday inuu furo barta kontroolka.”
Wargeysku wuxuu tilmaamay in sheekadani ay halkaas ku ekaan karto, laakiin bartii koontaroolka ayaa ku xirmatay mar kale inta uu Roland ka soo bixin gaarigiisa, wuxuu mar kale noqday maxbuus, wadayaashii baabuurti daba taagneyd ayaa ka dhamaaday sabarkii iyagoo ku xayiran gadaashiisa meel kale oo laga baxo oo aan jirin, waxay bilaabeen inay ku kordhiyaan culeyska, waxay wada fureen hoonka gawaaridooda, halka Roland murugta ku sii badatay, gaar ahaan Darawel ka mid ah gawaarida gadaashiisa taagan ayaa sidoo kale heysta ticket qiimihiisu yahay 170,392 euro.
Kadib markii fowdadu fiday oo badatay, Roland wuxuu isku dayay inuu waco lambar ku qornaa goobta parking, laakiin isku daygiisa ayaa fashilmay cilad shabakadeed awgeed. 45 daqiiqo ayaa laga soo gudbay ka hor inta uusan awoodin inuu ka baxo goobta gaariga la dhigto.
“Waxaan ku xayirmay meel gawaarida la dhigto oo aan lahayn kormeer, shaqaale, adeege, joogitaan la’aanta qof awood u leh inuu ku caawiyo haddii dhibaato dhacdo; tani waa mid khatar ah oo cabsi leh!” Roland ayaa u sheegay wargeyska.
Dhinaceeda, maamulka parking Edigo ayaa tilmaamay- “inay ka xun yihiin dhacdadan” – wuxuu cadeeyay in qalad kumbuyuutar ah uu ka dhacay App-ka “OBNGO”, waana taasi sababta waxan oo dhan keenay. Markii dambe waxaa si dhakhso ah loo xaliyey dhibaatadaasi ,” sida ay sheegtay shirkadda oo leh 120 goobood oo gawaarida la dhigto oo ku yaalla magaalada Paris.